सुनको भाउ बढ्दो क्रममा, आज कति? « AayoMail
सुनको भाउ बढ्दो क्रममा, आज कति?
बहुमूल्य पहेँलो धातु सुनको भाउ तीन दिनदेखि बढिरहेको छ। आज मंगलबार पनि तोलामा २ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। सोमबार तोलामा ४ सय रुपैयाँ बढेको थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल (२४ क्यारेट) सुनको भाउ मंगलबार तोलाको ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार ९० हजार ४ सय, आइतबार ९० हजार र गएको शुक्रबार ८९ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो।
त्यसैगरी तेजाबी (२२ क्यारेट) सुनको भाउ मंगलबार ९० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेको हो। हिजो सोमबार ८९ हजार ९ सय, आइतबार ८९ हजार ५ सय र शुक्रबार ८९ हजार ४ सय ५० मा अडेको थियो।
त्यस्तै चाँदीको भाउ भने तोलामा २५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म स्थिर रहेको चाँदी आज मंगलबार तोलाको १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार १ हजार ३ सय थियो। आइतबार र शुक्रबार १ हजार २ सय ९५ मा कारोबार भएको थियो।
छापावाल सुन वैशाख १४ मा तोलाको ९१ हजार २ सय, १५ मा ९० हजार ५ सय, १६ मा ९० हजार ८ सय, १७ मा ८९ हजार ५ सय, १९ मा ९० हजार र २० गते ९० हजार ४ सय रुपैयाँ थियो।